IWCA Ramangwana Leader Mbairo - Yepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Association
KUDA KWEZVINHU: 2022 IWCA Ramangwana Mutungamiriri Scholarship Awards
Sangano reInternational Writing Centers Association (IWCA) rakazvipira kupa mikana yebudiriro yehunyanzvi kunhengo dzevadzidzi venzvimbo yekunyora uye nekucherechedza varairidzi vezera uye/kana vatariri vangave vari undergraduate uye vakapedza kudzidza vanoratidza hunyanzvi hwehutungamiriri uye kufarira muzvidzidzo zvepakati pekunyora.
Iyo IWCA Ramangwana Vatungamiriri Scholarship ichapihwa kune vatungamiriri vana venzvimbo yekunyora. Gore rega rega angangoita mudzidzi mumwe chete akapedza kudzidza uye angangoita mudzidzi mumwe apedza kudzidza anozozivikanwa.
Vanyoreri vanowana bhezari iyi vachapihwa $250 uye vachakokwa kuti vauye kuzodya masikati kana kudya kwemanheru nevatungamiriri veIWCA panguva yemusangano wepagore weIWCA.
Kuti unyore, unofanirwa kunge uri nhengo yeIWCA ine chimiro chakanaka uye woendesa chirevo chakanyorwa che500-700 mazwi achikurukura kufarira kwako munzvimbo dzekunyora uye zvibodzwa zvako zvenguva pfupi uye zvenguva refu semutungamiri wenguva yemberi munzvimbo yekunyora. Tumira chikumbiro chako kuburikidza iyi fomu yeGoogle.
Chirevo chako chinogona kusanganisira nhaurirano ye:
Remangwana redzidzo kana zvirongwa zvebasa
Nzira dzawakabatsira nayo kunzvimbo yako yekunyora
Nzira dzawakagadzira kana dzaungade kuvandudza munzvimbo yako yekunyora basa
Mhedzisiro yawakaita pavanyori uye/kana nharaunda yako
Munyoreri anonyatso tsanangura avo chaiwo, akadzama zvibodzwa zvenguva pfupi.
Munyoreri anonyatso tsanangura avo chaiwo, akadzama zvinangwa zvenguva refu.
Kugona kwavo kuve mutungamiri wenguva yemberi munharaunda yekunyora.
Ndokumbira utungamire chero mibvunzo (kana zvikumbiro kubva kune avo vasingakwanise kuwana fomu reGoogle) kune IWCA Awards Co-Chairs Leigh Elion (lelion@emory.edu) naRachel Azima (razima2@unl.edu).
Zvikumbiro zvinofanirwa kusvika June 1, 2022.